Burmese Hearts news – BurmeseHearts http://www.burmesehearts.com Online courses marketplace in Burmese language. Becomeastudent, becomeateacher, learn Thu, 29 Nov 2018 07:26:45 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.2 http://www.burmesehearts.com/wp-content/uploads/2015/09/cropped-SortingBurmeseNumbersA-32x32.png Burmese Hearts news – BurmeseHearts http://www.burmesehearts.com 32 32 အထီးကျန်မှုမှသည် အားသာချက်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%91%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%99%e1%82%88%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b9-%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%81%e1%80%ba/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%91%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%99%e1%82%88%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b9-%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%81%e1%80%ba/#respond Thu, 29 Nov 2018 07:21:01 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74788
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%91%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%99%e1%82%88%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b9-%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%81%e1%80%ba/feed/0ဝါသနာရှင်နှင့် ပါရမီရှင်လေးများအား ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9d%e1%80%ab%e1%80%9e%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7-%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%9b%e1%80%99%e1%80%ae%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%84/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9d%e1%80%ab%e1%80%9e%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7-%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%9b%e1%80%99%e1%80%ae%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%84/#respond Wed, 28 Nov 2018 12:04:16 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74771
မိဘတိုင်းဟာ ကိုယ့်သားသမီးကို “Something Special”လို့ ခံစားတတ်ကြတာ ဓမ္မတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်စိတ်ထင်နေလို့ပဲ ကိုယ့်သားသမီးဟာ “Something Special” ဖြစ်နေတာလား ။ တကယ့်ကို “Someone Special” ဖြစ်နေတာလားဆိုတာကတော့ ဝါသနာရှင် နဲ့ ပါရမီရှင်လေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတဲ့မိဘတွေက သက်သေပြသွားတာပါ။ ကိုယ့်သားသမီးဟာ ထူးခြားတဲ့ပါရမီရှင်လေးလား။ ဘယ်မှာပါရမီပါလာခဲ့သလဲ။ ဘယ်ဘက်မှာထူးချွန်နေတာလဲဆိုတာ မှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်ပြီး သူသန်ရာ သန်ရာဘက်တွေမှာ ထူးချွန်သထက် ထူးချွန်အောင်လုပ်ပေးဖို့ အရေးအကြီးအဆုံး တစ်ချက်ရှိတယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ “ကိုယ်ကကိုယ့်သားသမီးကို ဘာဖြစ်စေချင်သလဲ” ဆိုတာ မေ့ထားဖို့ပါပဲ။ တကယ်လို့များ ကိုယ့်ဆန္ဒနဲ့ သူထူးချွန်ရာ ထပ်တူမကျခဲ့ရင် သားသမီးအပေါ် ကိုယ့်ဖြစ်စေချင်တဲ့စိတ်တွေက လွှမ်းမိုးဦးဆောင်နေတော့ သားသမီးဖြစ်ချင်တာနဲ့ သားသမီးထူးချွန်ရာကို မြင်သိပြီး မြေတောင်မြှောက် ပံ့ပိုးပေးဖို့ဆိုတာ ဝေးနေမှာပေါ့။ ကိုယ့်ကို မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ သားသမီးဟာ ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာ လိုက်လုပ်ရင်း သူထူးချွန်ရာဘက်မှာ လုပ်ခွင့်မရတော့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့သာအချိန်ကုန်သွားခဲ့ရင် တချိန်မှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်နေရာတွေဟာ တထပ်တည်းမကျမှန်း သိလိုက်ချိန်ဟာ […]]]>
မိဘတိုင်းဟာ ကိုယ့်သားသမီးကို “Something Special”လို့ ခံစားတတ်ကြတာ ဓမ္မတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်စိတ်ထင်နေလို့ပဲ ကိုယ့်သားသမီးဟာ “Something Special” ဖြစ်နေတာလား ။ တကယ့်ကို “Someone Special” ဖြစ်နေတာလားဆိုတာကတော့ ဝါသနာရှင် နဲ့ ပါရမီရှင်လေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတဲ့မိဘတွေက သက်သေပြသွားတာပါ။
ကိုယ့်သားသမီးဟာ ထူးခြားတဲ့ပါရမီရှင်လေးလား။ ဘယ်မှာပါရမီပါလာခဲ့သလဲ။ ဘယ်ဘက်မှာထူးချွန်နေတာလဲဆိုတာ မှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်ပြီး သူသန်ရာ သန်ရာဘက်တွေမှာ ထူးချွန်သထက် ထူးချွန်အောင်လုပ်ပေးဖို့ အရေးအကြီးအဆုံး တစ်ချက်ရှိတယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ “ကိုယ်ကကိုယ့်သားသမီးကို ဘာဖြစ်စေချင်သလဲ” ဆိုတာ မေ့ထားဖို့ပါပဲ။
တကယ်လို့များ ကိုယ့်ဆန္ဒနဲ့ သူထူးချွန်ရာ ထပ်တူမကျခဲ့ရင် သားသမီးအပေါ် ကိုယ့်ဖြစ်စေချင်တဲ့စိတ်တွေက လွှမ်းမိုးဦးဆောင်နေတော့ သားသမီးဖြစ်ချင်တာနဲ့ သားသမီးထူးချွန်ရာကို မြင်သိပြီး မြေတောင်မြှောက် ပံ့ပိုးပေးဖို့ဆိုတာ ဝေးနေမှာပေါ့။ ကိုယ့်ကို မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ သားသမီးဟာ ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာ လိုက်လုပ်ရင်း သူထူးချွန်ရာဘက်မှာ လုပ်ခွင့်မရတော့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့သာအချိန်ကုန်သွားခဲ့ရင် တချိန်မှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်နေရာတွေဟာ တထပ်တည်းမကျမှန်း သိလိုက်ချိန်ဟာ အရမ်းနောက်ကျသွားနိုင်တယ်။
ကျွန်မကတော့လေ ကိုယ့်သားသမီးကို ဘာဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့အစွဲကြီး လုံးဝကို မထားတာ။ သူဖြစ်ချင်တာကိုလုပ်ကိုင်ရင်း လူနေမှုဘဝမှာ ကောင်းမွန်သောလူတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေထိုင်နိုင်တဲ့ အသိ ၊ အတတ် ပညာတွေ သိတတ်ထားရင်ကို ကျေနပ်ပြီ။
လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်အသိတွေ ၊ မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တဲ့ အသိတွေ ခေါင်းထဲကို ငယ်ငယ်ကတည်းက စွဲနေအောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့ပဲ အားသန်တယ်။ ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ ထပ်ပြီးလေ့လာတတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ ပညာရပ်တွေနဲ့ သူဝါသနာပါရာ ၊ ထူးချွန်ရာ နယ်ပယ်မှာ လုပ်ကိုင်ရင်း ကိုယ့်ဘဝဖြစ်တည်မှုကိုကျေနပ် ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ကောင်းကျိုးပြု ၊ အများကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကောင်းကျိုးပြုနေထိုင်သွားဖို့ကိုပဲ ဦးစားပေးသင်ပြတယ်။
သာမာန်ကလေနဲ့မတူ ထူးခြားတဲ့ ပါရမီရှင်ကလေးဆိုတာ သူ့မှာ သူများနဲ့မတူ ထူးခြားတဲ့ ဗီဇပါရမီလေးပါလာတတ်တယ်။ အဲဒီဗီဇပါရမီလေးဟာ ခြေလှုပ်လက်လှုပ် ၊ စကားပြောတတ်တဲ့ အရွယ်ကလေးကစလို့ ဗီဇပြတတ်တယ်။ အဲဒီအရွယ်ကလေးကစလို့ သူ့ရဲ့ ဗီဇလေး ၊ ထူးခြားတဲ့အကျင့်ကလေးတွေကို သတိထားမိအောင်ကြည့်ပါ။ အဲဒါတစ်နှစ်အောက် အရွယ်ကလေးတည်းက စကြည့်ရမှာနော်။ တခါတလေ လသားကလေးအရွယ်လေးနဲ့လည်း ဗီဇပြတတ်တယ်။ သူတို့ဖြစ်ချင်ရာကို မိဘတွေရဲ့ဆန္ဒမရောပြွန်းခင်ကတည်းက သူတို့ပြတတ်ကြတယ်။ ဒါကို သတိထားမိဖို့လိုတယ်။
ဒီဘက်မှာ ဝါသနာပါတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ သူ့ဝါသနာကို ကိုယ်တွေ အုပ်ထိန်းသူမိဘတွေကလည်း သတိထားမိပါပြီတဲ့။ နောက်တဆင့်က ဒီဝါသနာပျောက်ပျက်မသွားအောင် ထိန်းသိမ်းပျိုးထောင်ပေးဖို့လိုတယ်။ လမ်းမှားရောက်မသွားအောင် ပဲ့ပြင်ထိန်းပြုပေးဖို့လိုတယ်။
ကလေးပဲလေ ပြီး …. ပြီးသွားမှာပါလို့ ရော့တိမ်တဲ့အတွေးနဲ့ ပစ်မထားမိဖို့လည်း လိုတယ်။ ထူးချွန်တဲ့ကလေးရဲ့နောက်မှာ အဲဒီကလေးကို အမြဲအရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ လိုအပ်နိုင်တာတွေမှန်သမျှ လိုက်ပံ့ပိုးပေးတဲ့ မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေရှိတယ်။ ထူးချွန်တဲ့ကလေးကို လိုချင်တဲ့ကိုယ်ဟာ အဲဒီလိုမိဘမျိုးဟုတ်ရဲ့လား။
ကလေးတိုင်းဟာ သီချင်းသံကြားရင် ဒွန့် .. ဒွန့် .. ဒွန့် .. ဒွန့် .. နဲ့ ရှိတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် နာရီအတော်ရှည်ကြာ မစားအသောက် ၊ မမောမပန် ၊း မငြီးမငြူ ဆို ၊ က ၊ တီးမှုတ်ဖို့ အချိန်မရွေးရှိနေတဲ့ကလေးဟာ ထူးခြားသူလေးပါ။
ယောက်ျားကလေးတိုင်းလိုလို ဘောလုံးကန် ဆော့ကစားမှုမှာ နှစ်သက်တတ်ကြတယ်ဆိုပေမယ့် ပွဲတိုင်းဦးဆောင် ၊ ကန်တိုင်းအောင် ဘောကန်ဖို့ဆို နာရီအတော်ရှည်ကြာ မစားအသောက် ၊ မမောမပန် ၊း မငြီးမငြူ အချိန်မရွေးတက်ကြွနေတတ်တဲ့ကလေးဟာ ထူးခြားသူလေးပါပဲ။
ကစားတိုင်း သေနတ်ကိုင် ပစ်ခတ်နေရတာကိုမှ ခုံမင်တဲ့ ကလေးလေးတွေရှိမယ်။ သူ့ဘေးမှာ အလှပြင်တဲ့သူတွေ တွေ့မြင်နေရတာမျိုးမဟုတ်လည်းဘဲ အလှအပရေးရာကို တသသနဲ့ခုံမင်နေတတ်တဲ့ ကလေးလေးတွေလည်းရှိမယ်။ ယောကျာ်းလေးမို့ ဒါမလုပ်ရ ၊ မိန်းကလေးမို့ ဒါမသင့်တော် ၊ သေနတ်ကိုင်ကစားတိုင်း အရိုက်ခံရ ၊ အလှပြင်ကစားတိုင်း အဆူခံရတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ဝါသနာပါရာ ထူးချွန်နိုင်တဲ့ဘက်မှာ လုပ်ကိုင်ခွင့်မရတဲ့သူတွေပါပဲ။
ဒီနယ်ပယ်မှာ မဟုတ်ပေမယ့် အခြားနယ်ပယ်တွေမှာ ဝါသနာပါပြီး ထူးချွန်နိုင်တဲ့ကလေးတွေဟာ မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေရဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သူတို့စိတ်ပါရာနယ်ပယ်မှာ လုပ်ခွင့်မရဘဲ ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့ ကလေးငယ်တွေ ၊ ဆယ်ကျော်သက်တွေ ၊ အရွယ်ရောက်လူငယ်တွေလည်းရှိတယ်။
လူတိုင်းမှာ အလှကိုယ်စီရှိကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်မလက်ခံတာမို့ ကလေးတိုင်းမှာလည်း အားသာချက်ကိုယ်စီရှိကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ သူတို့အားသာချက်ကို အုပ်ထိန်းသူမိဘ ၊ သင်ပေးသူဆရာတွေက သတိထားမိပြီး ပံ့ပိုးပေးပါမှ ကလေးဟာ ထူးချွန်တဲ့သူအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရနိုင်တာပါ။
ထူးချွန်တဲ့ကလေးတွေနည်းနေတာက ပိတ်ပင်တဲ့မိဘ ၊ သတိထားမှုအားနည်းတဲ့ဆရာ ၊ ပံ့ပိုးမှုမရှိတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဆိုရင် မမှားဘူးနော်။ ထူးချွန်တဲ့ကလေးအဖြစ် ရောက်ရှိလာဖို့ ပံ့ပိုးပေးဖို့ဆိုတာ တကယ်ကိုမလွယ်ပါဘူး။ ထူးချွန်အောင် အရမ်းကြိုးစားတဲ့ ကလေးရဲ့နောက်မှာ ကလေးကို အရမ်းပံ့ပိုးတဲ့လူကြီးမိဘ ရှိပါတယ်။
ကလေးတစ်ယောက် အများအသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့အထိ ထူးချွန်လာဖို့ဆိုတာ အားထုတ်တဲ့ကလေးရယ် ၊ ဒီလိုအားထုတ်ခွင့်ရအောင် အစစအရာရာ အနောက်ကနေ ပံ့ပိုးလုပ်ကိုင်ပေးနေတဲ့ မိခင်ရယ် ၊ လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရတဲ့ ဖခင်ရယ် ၊ နည်းမှန်လမ်းမှန် မြန်မြန်ဆန်ဆန် သင်ကြားပြသပေးနိုင်တဲ့ ဆရာတွေရှိတယ်။
ထူးချွန်တဲ့ ကလေးမိဘတိုင်းဟာ အရမ်းပင်ပန်းပါတယ်။ ကလေးထက်တောင် ပိုပင်ပန်းနိုင်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်သားသမီးထူးချွန်တယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်သတင်းလေး ၊ ဆုဖလားလေးတွေအတွက် ပီတိစားရင်း ပင်ပန်းသမျှ မပင်ပန်းဘူးထင်ပြီး ပြုံးရွှင်နေတတ်တဲ့ အနန္တကျေးဇူးရှင်မိဘတွေပါ။
ကျွန်မကတော့ ထူးချွန်တဲ့ကလေးတွေရဲ့ သတင်းတွေကို ကြားမြင်ရတိုင်း ဒီကလေးနောက်က ပံ့ပိုးပေးကြတဲ့ မိဘ ၊ ဆရာသမားတွေကို တအားကျေးဇူးတင်မိတယ်။ ထူးချွန်တဲ့ကလေးတွေဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ အနာဂါတ်ကောင်းကင်ကို လှပအောင် တန်ဆာဆင်ပေးတဲ့ သက်တန့်ငယ်လေးတွေပါပဲ။
ထူးချွန်တဲ့ကလေးတွေကြားထဲမှာမှ ပါရမီရှင်လေးတွေလည်း ရှိကြတယ်။ ဝါသနာရယ် ၊ ပံ့ပိုးမှုရယ် ၊ သင်ယူကြိုးစားလေ့ကျင့်မှုရယ် ပေါင်းစပ်ရင် ထူးချွန်တဲ့သူတွေ မွေးထုတ်ပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပါရမီရှင်လေးတွေကတော့ မွေးရာပါဗီဇသန္ဓေအရ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြတာပါ။ ဝါသနာဆိုတာ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ကိုင်ခွင့်မရရင် ယောင်ဝါးဝါးနဲ့ တခြားဟာတွေလုပ်ကိုင်ရင်း တခါတရံမှ ခေါင်းထောင်လာတတ်ကြတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
ပါရမီပါလာရင်တော့ ဒါမှဒါ ။ မွေးကတည်းက .. ဒါ ၊ စိတ်အာရုံထဲအမြဲရောက်နေတာလည်း .. ဒါ ၊ လုပ်ကိုင်ချင်တာလည်း .. ဒါ ၊ အသက်မွေးချင်တာလည်း .. ဒါ ၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ပြုချင်တာလည်း .. ဒါ ၊ ဒါ မှ ဒါပါပဲ။ သူတို့ဟာ ဒါကို တစိုက်မိုက်မိုက်လုပ်ကိုင်ရင်း နိုင်ငံကျော် ၊ ကမ္ဘာကျော် ပါရမီရှင်လေးတွေ ဖြစ်လာကြတာပါ။
ဝါသနာရှင်တွေကို သူတို့ဘဝ လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူတွေက ပိတ်ပင်ထားလို့ရပေမယ့် ပါရမီရှင်လေးတွေကျတော့ လူကြီးမိဘဆရာသမားတွေက ပိတ်ပင်ထားသည့်တိုင် ပိတ်ထားတဲ့အလွှာကို သူ့ဘာသာ ဖောက်ထွက်ပြီး ဒီနယ်ပယ်မှာ သူ့ဘာသာသူ ဆန်းသစ်တီထွင်လို့ တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်း ပျော်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲ သူတို့တွေဟာ ထူးချွန်တဲ့သူဖြစ်ရုံမက အောင်မြင်တဲ့သူတွေအဖြစ် ရယ်တည်နေတတ်ကြတယ်။
ကိုယ့်သားသမီးဟာ ပါရမီရှင်တစ်ယောက်လို့ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ဒီအကြောင်းအရာကို ဘာမှ ကိုးကားရေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကျွန်မကြုံတွေ့တဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ ကျွန်မနားလည်သလောက်နဲ့ အများနားလည်အောင် အလွယ်ကူဆုံး တိုတိုတုတ်တုတ်ပြောရရင် အောက်ကအချက်တွေနဲ့ သင့်ကလေး ကိုက်ညီနေသလားကြည့်ပါ။
၁။ ကလေးဟာ သိတတ်စလသားအရွယ်ကတည်းကစလို့ ဒီဘက်မှာ ဝါသနာပါကြောင်း ထူးထူးခြားခြား ဗီဇပြခဲ့တယ်။
၂။ ကလေးဟာ ဒါနဲ့ဆက်စပ်ပတ်သက်တာလေးတွေဆိုရင် သူ့ဘာသာအလိုလိုသတိထားမိပြီး စူးစမ်းစိတ်နဲ့ စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်နေတတ်တယ်။
၃။ ကလေးငယ်ဟာ ဘယ်လောက်ငယ်ငယ် ဒီဘက်မှာ သင်ယူဖို့ စိတ်အားထက်သန်ပြီး သင်ယူဖို့ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကို တသွေမတိမ်းနားထောင်ပြီး လိုက်နာသင်ယူတတ်တယ်။
၄။ ကလေးဟာ တခြားကလေးတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ဒီဘက်မှာ သင်ယူတတ်မြောက်မှု အရမ်းလွယ်ကူမြန်ဆန်တယ်။ ဒါကိုသင်ယူဖို့ဆို အမြဲတက်ကြွပြီး အချိန်ကြာကြာသင်ယူ ၊ လေ့ကျင့်ဖို့လည်း မငြီးငြူတတ်သူဖြစ်တယ်။
၅။ ကလေးဟာ ဒီဘက်မှာ ဆရာသင်ထားတာထက်ပိုပြီး သူ့ဘာသာသူ တီထွင်ကြံဆလုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိတယ်။ အခွင့်ရရင်ရသလို တီထွင်ကြံဆလုပ်ကိုင်တယ်။
ဒီအခြေခံ(၅)ချက်နဲ့ ကလေးဟာ ကိုက်ညီနေပြီဆိုရင် ကိုယ့်ကလေးဟာ ဒီဘက်မှာ ပါရမီပါလာခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်လို့ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါပြီ။
ကလေးငယ်ကို သူဝါသနာပါရာမှာ ထူးချွန်ဖို့ မြေတောင်မြှောက်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ သူ့ဗီဇသန္ဓေပါလာတဲ့ ပါရမီရှင်လေးကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးလိုတာပဲဖြစ်ဖြစ် မိဘတွေဟာ အောက်ပါအခြေခံအချက်တွေကို ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။
၁။ ကလေးအပေါ် နားလည်မှုပေးပါ။ စိတ်ရှည်ပါ။ သူ့သင်ယူမှုကို အားပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိပါ။ သူ့ကျရှုံးမှုအပေါ် ခွန်အားပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိပါ။ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ကြိုးစားသင်ယူလေ့ကျင့်ဖို့ စိတ်စွမ်းအားမျိုး လေ့ကျင့်ပေးပါ။
(ဒီတချက်နဲ့တင် ပြောရလွယ်တယ်။ လုပ်ရခက်တယ်နော်။ တခြားသူကို စိတ်စွမ်းအားပေးဖို့ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်က ဒီလိုစိတ်စွမ်းအားမျိုး လေ့ကျင့်မထားရင် ကိုယ့်မရှိတဲ့အရာကို ဘယ်လိုပေးရပါ့မလဲ။ ငါပြောသလိုလုပ် ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့ဖြစ်နေရင် ကလေးဟာ ငါလုပ်တာကိုပဲ လိုက်လုပ်မှာပါ။ ဒီတော့ ကလေးကိုဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်စေချင်ရင် ကလေးအနားမှာ အနီးဆုံးရှိနေတဲ့ ကိုယ်တိုင်က ဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်နေမှ ကလေးဟာ ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်လာမှာပါ။)
၂။ ကလေးငယ်ရဲ့ သင်ယူလေ့ကျင့်မှု ၊ တိုးတက်မှု အခြေအနေကို အမြဲမပြတ်လေ့လာပါ။
(ယခင်တပတ် ၊ ယခင်လ စတဲ့ စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ နှိုင်းဆပြီး တိုးတက်မှုရှိ ၊ မရှိ ၊ ဘာကြောင့် မတိုးတက်လာသလဲ ၊ ဘာကြောင့် ဆုတ်ယုတ်သွားသလဲ ၊ ဘာကြောင့် တအားတိုးတက်နေသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သတိထားဖို့မမေ့ပါနဲ့။ လိုတိုးပိုလျှော့အခြေအနေတွေကို ဖန်တီးပြုပြင်ပေးဖို့လည်း ကိုယ်ကဦးဆောင်ရမှာပါ။)
၃။ ကလေးသင်ယူမှု ပညာရပ်တွေမှာ ကိုယ်တိုင်က စိတ်ပါဝင်စားမှုမျိုးမရှိသည့်တိုင် ကလေးဘာတွေ ဘယ်လိုသင်နေရသလဲဆိုတာကို နားလည်အောင်တော့ ကြိုးစားလေ့လာပါ။ ဒီဘက်ပိုင်းမှာ တခြားသူတွေက ဘာတွေ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်မျိုးထွက်လာတယ် ၊ ဘယ်ဆရာက အချိန်တိုအတွင်း ဘယ်လိုပိုကောင်းအောင် သင်ကြားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတွေကိုလည်း ရှာဖွေစနည်းနာပါ။ ဒီလိုဆရာနဲ့ ဒီလိုနည်းလမ်းတွေကို ပံ့ပိုးပြီး ကလေးကို အကောင်းဆုံးသင်ယူခွင့်ရဖို့ ဖန်တီးပေးပါ။
၄။ ဒီတလိုင်းချည်း ချွန်ထွက်နေထာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့ စိတ်ထား ၊ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်အောင် နေထိုင်နည်း ၊ လူနေမှုဘဝမှာ မရှိမဖြစ် ၊ မတတ်မဖြစ်တဲ့ ပညာရပ်တွေ သိရှိတတ်မြောက်ဖို့ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာတွေလည်း ထပ်လုပ်ရဦးမှာပါ။
၅။ ဒါတွေအကုန် စိတ်အေးသက်သာစွာ လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ လုံလောက်တဲ့ စားဝတ်နေရေးနဲ့ ပံ့ပိုးနိုင်တဲ့ ငွေအခြေအနေလည်း ရှိဦးမှဖြစ်မှာမို့ ငွေကြေးတောင့်တင်းဖို့ဆိုတဲ့ အခြေခံအချက်လည်း မေ့ပစ်ထားလို့မရပါဘူး။
ဒီအခြေခံ(၅)ချက်နဲ့ ကောင်းကောင်းပြုစုပျိုးထောင်ပေးသွားမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်မျိုးဆက်ထဲမှာ ထူးချွန်အောင်မြင်တဲ့ မျိုးဆက်ကလေးကို ပျိုးထောင်နိုင်ပြီပေါ့။ ကိုယ်မထူးချွန်ရင်နေပါစေ ထူးချွန်တဲ့ မျိုးဆက်ကို အဆင့်ဆင့် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသွားနိုင်ရင် ထူးချွန်တဲ့မျိုးဆက်ကို ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်မှာပါ။ နောက်မျိုးဆက်ဆိုတာ ဒီမျိုးဆက်ထက် ထူးချွန်နေပါမှ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်မှာပါ။
ကိုယ်ဟာ ကိုယ့်မိဘလောက်မထူးချွန်ခဲ့ဘဲ ကိုယ့်သားသမီးဟာလည်း ကိုယ့်လောက်မှ မထူးချွန်ရင် ကိုယ်တာဝန်ရှိနေတဲ့ ကိုယ့်မျိုးဆက်အပေါ် ကိုယ်တာဝန်ကျေပါရဲ့လား …..
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9d%e1%80%ab%e1%80%9e%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7-%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%9b%e1%80%99%e1%80%ae%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%84/feed/0Join our team as Sales Consultant! http://www.burmesehearts.com/join-our-team-as-sales-consultant/ http://www.burmesehearts.com/join-our-team-as-sales-consultant/#respond Tue, 11 Jul 2017 01:54:09 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74403
Sales Consultant – F (3) Posts Salary- up to4lakh++ Location-Downtown Job Description Meets with clients inasales environment to drive service sales Makes sales appointments with clients Teams with other employees to make sure that service is best quality Generates new leads by meeting with clients Follows up with any clients […]]]>
Sales Consultant – F (3) Posts
Salary- up to4lakh++
Meets with clients inasales environment to drive service sales
Teams with other employees to make sure that service is best quality
Generates new leads by meeting with clients
Follows up with any clients to make sure that they are satisfied with our service
Discovers how to market products to new clients
Always looks for new ways to make products attractive to Clients
Call / Viber us at +959450009539
( ask for Thin Thin Khin )
Must have working experience in (hotel/service) field
At least (2) Years working experience
If you feel this post is interesting, please drop your resume to sanda@bhedtech.com or
]]> http://www.burmesehearts.com/join-our-team-as-sales-consultant/feed/0Echelon Asia Summit 2017 serves up5Tracks in its sixth year, launches integrated digital Ecosystem platform for cross-border engagement all year round http://www.burmesehearts.com/echelon-asia-summit-2017-serves-up-5-tracks-in-its-sixth-year-launches-integrated-digital-ecosystem-platform-for-cross-border-engagement-all-year-round/ http://www.burmesehearts.com/echelon-asia-summit-2017-serves-up-5-tracks-in-its-sixth-year-launches-integrated-digital-ecosystem-platform-for-cross-border-engagement-all-year-round/#respond Fri, 16 Jun 2017 15:14:42 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74354
Organised by e27, the conference runs forapower-packed two days on 28-29 June at Singapore EXPO through dedicated opportunities for insights, connections, talent and funding. The experience continues online with year-long access for registered participants. ● The conference will happen over2days,2stages and4Tracks: Future Stage, Create Stage, Startup Academy […]]]>
Organised by e27, the conference runs forapower-packed two days on 28-29 June at Singapore EXPO through dedicated opportunities for insights, connections, talent and funding. The experience continues online with year-long access for registered participants.
● The conference will happen over2days,2stages and4Tracks: Future Stage, Create Stage, Startup Academy Track (powered by General Assembly), Investor Track (Venturecon) and Corporate Innovation Track (powered by 500 Startups)
● TOP100 returns as Asia Pacific’s largest curated vertical-sorted pitching showcase with over 15 countries represented
● In numbers: Expect over 5,000 attendees, over 1,000 startups, 250 investors, 200 exhibiting companies, 100 pitches, 80 world-class speakers, and 20+ countries represented
● 2017 also marks e27’s 10th year anniversary,6years of running its flagship Echelon conferences, andatransition into an online-to-offline resource platform empowering entrepreneurs across Asia
15 June 2017, Singapore –Echelon Asia Summit 2017, the longest running Asia-focussed tech, startup and investment conference held in Singapore returns this June 28-29 at Singapore EXPO to bring the startup ecosystem’s rising stars and industry thought leaders together.
The conference and platform is set to host over 5,000 attendees consisting of digital professionals, students, startup founders, investors, corporate representatives and policy makers from over 20 countries.
Organised by e27 through showcasing emerging trends and disruptive technologies, Echelon prides itself on curating market specific insightful content, and bringing together market ready startups and active investors. Furthermore, 2017 marks the transition of Echelon intoafull fledged online-to-offline resource platform for Asia’s entrepreneurs, andacommitment to tell Southeast Asia’s story onaglobal stage.
Taking “longest-running Asian startup conference” toawhole new level
“The platform (e27.co) that we have created for our e27 community gives rise to value creation and business matching opportunity throughout the entire year,” said Thaddeus Koh, Co-Founder, e27. “Integrating e27.co with our flagship conference isanatural progression for the entire ecosystem to continue building relationships and insights throughout the year.”
Also new to Echelon this year isaprofile-based approached to content tracks and access to cater toagrowing diversity and maturity of the regional ecosystem. This will be achieved with the support of long-term strategic partners General Assembly and 500 Startups, respectively powering the Startup Academy track and Corporate Innovation tracks.
To cater toadiverse crowd, attendees will be able to access multiple tracks and zones:
● Future Stage: inspirational talks from industry disruptors and culminating inashowcase of founders representing innovative ideas from across Asia Pacific.
● Startup Academy Track: Business and Technical 101s with other early-stage startup founders, powered by General Assembly
● VentureCon: an investor-exclusive track for intimate discussions on theses and strategies from Angel, to Seed and Series A and beyond
● Corporate Innovation Track: A corporate-pass-only track powered by 500 Startups dedicated to corporate representatives looking to integrate innovation into the core of their business to stay relevant in line with Startup SG and regional smart city initiatives.
● TOP100 powered by Echelon Connect: A dedicated structured networking area for 100 promising startups to meet with 45 active international investors based on e27’s proprietary algorithm. Matched startups and investors will be re-connected online for follow ups post-Conference on Echelon Connect platform (launching July 2017)
● Hiring Zone powered by Wantedly featuring pre-scheduled interviews by 30 companies
● Deep Tech Zone powered by SGInnovate
Echelon TOP100 curates 100 of the region’s most promising startups to showcase in Singapore
Echelon TOP100, Asia Pacific’s largest pitching showcase (Fight Club) and fundraising platform (Echelon Connect) also returns to the Echelon stage withanew vertical-specific spin on pitching over past years’ country-based sparring. From over 850 applications, 100 companies were selected by an internal panel of judges to fly to Singapore to showcase their products and services in the TOP100 Marketplace.
“There is stillaneed for greater showcase of APAC’s talent and thought leadership, rather than constantly looking to Silicon Valley or Europe. This was our goal since our incorporation 10 years ago, and 10 years on, e27 still takes pride in discovering, showcasing, and converging the diversity of the region,” Thaddeus adds. “Our role in the fast-changing ecosystem – online or offline – will continue to evolve so as to stay true to our mission of empowering entrepreneurs across borders and barriers.”
Echelon Asia Summit 2017 (June 28-29, Singapore) passes can be purchased online https://e27.co/echelon/asia/register until June 27, 23:59 for early access to the Ecosystem platform. At the door passes are also available from June 28, 08:00 at Singapore EXPO, Hall 2B.
Contact us for your Promo Code 30 % off
]]> http://www.burmesehearts.com/echelon-asia-summit-2017-serves-up-5-tracks-in-its-sixth-year-launches-integrated-digital-ecosystem-platform-for-cross-border-engagement-all-year-round/feed/0Benefits of IT certification for learners from Myanmar http://www.burmesehearts.com/benefits-of-it-certification-for-learners-from-myanmar/ http://www.burmesehearts.com/benefits-of-it-certification-for-learners-from-myanmar/#respond Mon, 15 May 2017 14:46:31 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74330
CISCO, RED HAT, LINUX, IOS, JAVA, ANDROID]]>
Do you love technology and anything that is connected to the IT domain? Do you even haveacouple of skills that allow you to complete certain task asapro? Well, then why don’t you pursue an IT certification and have your talent and skills recognized as they should? Working in the IT domain can be very rewarding, as it provides some of the best paid jobs in the world. And the best part about working in this domain is that you can outsource your talents, knowledge, and skills. It doesn’t matter if you live in Myanmar or not, because you can be employed byavariety of companies that have headquarters around the world. So, if you arealearner from Myanmar, it is definitely worth exploring such opportunities.
Why do you need an IT certification? Let’s say an IT company is interested in hiring you, how would you convince that company to close the deal with you? Without proper certification, you have slight chances to landagood IT project, which will help you earn the amount of money you deserve. Yes, you could provideaportfolio of past projects, if you have one, butacertification doesn’t just mean to have an official recognition of what you can do, as it also helps you acquire the skills you didn’t have before and complete your knowledge package with valuable information. Practically, through an IT certification, you choose to invest in your development, which will only give you benefits for the long term. If you dream about landingajob at an important IT company, this is the best way to start paving your road towards suchagoal.
IT certification for learners from Myanmar
Secure your future and check out what the BurmeseHearts.com learning community has to offer. With the help of this online platform, you will be able to find international certification training and exams, such as Cisco CCNA, RedHat Linux, Java Courses, Android Dev and IOS courses. For any IT enthusiast, most certainly that the previously mentioned course names are not spelled inaforeign language, as you probably know what they are all about. You just need to make the step towards achievingacertification that is recognised at an international level, which will open doors for you when it comes to finding your dream job.
Don’t postpone this anymore, because now it’s the time to do it. The more you wait, the further away your dream job will get. Time is precious, so opt foracourse today and get that IT certification you need to becomeareliable and reputable IT professional. It is true that you may have sufficient experience and you did great by learning everything on your own, butacertification works pretty much likeadriver’s license. It shows everyone that you can indeed manage and handle the tasks that come along when you are involved inaparticular project. An international IT certification will secure the position and salary you deserve, for all your hard work, inacompany that will respect your talent and value.
]]> http://www.burmesehearts.com/benefits-of-it-certification-for-learners-from-myanmar/feed/0Brief explanation on modern technologies http://www.burmesehearts.com/brief-explanation-on-modern-technologies/ http://www.burmesehearts.com/brief-explanation-on-modern-technologies/#respond Wed, 19 Apr 2017 09:29:47 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74252
Credit to Ei Maung – Co-founder of Fairway Technologies and Zaw Steven Htut – Founder Myanmars.net ]]>
Credit to Ei Maung – Co-founder of Fairway Technologies and Zaw Steven Htut – Founder Myanmars.net
]]> http://www.burmesehearts.com/brief-explanation-on-modern-technologies/feed/0Introduction to IP Addresses http://www.burmesehearts.com/introduction-to-ip-addresses-2/ http://www.burmesehearts.com/introduction-to-ip-addresses-2/#respond Fri, 10 Mar 2017 00:34:55 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74029
IP လိပ်စာများအကြောင်းကို သိရှိသဘောပေါက်သူအချို့ ရှိသော်လည်း အများစုမှာမူ ဘာမှန်းမသိကြသေးသလို ယင်းကို ဘာကြောင့် ခဏခဏကြားနေရမှန်း နားမလည်နိုင်ကြပေ။ ယခုဆောင်းပါးတွင် IP များနှင့် ၎င်းတို့၏ အထွေထွေ ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းကို နည်းပညာရှုပ်ထွေးမှုမရှိစေဘဲ အထိုက်အသင့် ဖော်ပြပေးပါမည်။ ယင်းတို့အကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိရအောင် ဆောင်ပါးအဆုံးထိ ဖတ်ရှုသွားစေလိုပါသည်။ IP လိပ်စာဆိုတာဘာလဲ။ (What is IP Address?) IP ဆိုသည်မှာ အင်တာနက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း (Internet Protocol) ကိုဆိုလိုပါသည်။ ကွန်ပျူတာတိုင်းတွင် ကွန်ရက်ပေါ်ရှိ ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ချက် သီးသန့်စီရှိကြသည့်အတွက် ယင်းမှာ (အဓိကအားဖြင့်) ထိုသို့ သတ်မှတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာအတွက် အင်တာနက် ပရိုတိုကောကို အသုံးချသည့် ကွန်ပျူတာကွန်ရက်များပေါ်ရှိ ကွန်ပျူတာတစ်ခုချင်းစီအတွက် သီးခြားကိန်းဂဏန်း အမှတ်အသားကို […]]]>
IP လိပ်စာများအကြောင်းကို သိရှိသဘောပေါက်သူအချို့ ရှိသော်လည်း အများစုမှာမူ ဘာမှန်းမသိကြသေးသလို ယင်းကို ဘာကြောင့် ခဏခဏကြားနေရမှန်း နားမလည်နိုင်ကြပေ။ ယခုဆောင်းပါးတွင် IP များနှင့် ၎င်းတို့၏ အထွေထွေ ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းကို နည်းပညာရှုပ်ထွေးမှုမရှိစေဘဲ အထိုက်အသင့် ဖော်ပြပေးပါမည်။ ယင်းတို့အကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိရအောင် ဆောင်ပါးအဆုံးထိ ဖတ်ရှုသွားစေလိုပါသည်။
IP လိပ်စာဆိုတာဘာလဲ။ (What is IP Address?)
IP ဆိုသည်မှာ အင်တာနက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း (Internet Protocol) ကိုဆိုလိုပါသည်။ ကွန်ပျူတာတိုင်းတွင် ကွန်ရက်ပေါ်ရှိ ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ချက် သီးသန့်စီရှိကြသည့်အတွက် ယင်းမှာ (အဓိကအားဖြင့်) ထိုသို့ သတ်မှတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာအတွက် အင်တာနက် ပရိုတိုကောကို အသုံးချသည့် ကွန်ပျူတာကွန်ရက်များပေါ်ရှိ ကွန်ပျူတာတစ်ခုချင်းစီအတွက် သီးခြားကိန်းဂဏန်း အမှတ်အသားကို သတ်မှတ်လွှဲအပ်ထားပါသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိ နိုင်ငံသားတိုင်းအတွက် ကွဲပြားခြားနားသော မှတ်ပုံတင်တစ်ခုစီ ရှိသလိုပင်၊ IP ဆိုသည်မှာလည်း ကွန်ပျူတာကွန်ရက်တိုင်းပေါ်မှ ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ကိရိယာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။
IP လိပ်စာသည် စက်ကိရိယာတိုင်းအတွက် သီးခြားကိန်းဂဏန်း အမှတ်အသားကို ပေးအပ်သည့်အပြင် အခြား လုပ်ငန်းဆောင်တာနှစ်မျိုး ရှိပါသေးသည်။ ပထမအချက်မှာ လက်ခံဆောင်ရွက်သူ (Host) သို့မဟုတ် ကွန်ရက်နယ်ပယ် (Network interface) ကို သတ်မှတ်ပေးပြီး ဒုတိယအချက်မှာ တည်နေရာကို ဖော်ပြပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းတွင် ရည်ရွယ်ချက် သုံးမျိုး ရှိပါသည်။ သို့သော် IP ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် ကျွန်ုပ်တို့က အမည်နာမအားဖြင့် ရှာဖွေနေသည်များကို သိရှိရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် လိပ်စာက တည်နေရာအကြောင်း ပြောပြကာ သွားရမည့်လမ်းကြောင်းက ထိုနေရာသို့ ဘယ်လိုသွားရမည်ကို သိရှိစေပါသည်။
၎င်းသည် ဘာနှင့်တူသလဲ။ (What Does It Look Like?)
IP လိပ်စာသည် ဂဏန်းနှစ်လုံးပါဝင်သောစနစ် (Binary) ကိန်းဂဏန်းများသာဖြစ်သော်လည်း လူ၏မျက်စိဖြင့် အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုနိုင်သည့် စာသားဖိုင်များ အနေနှင့် ဖော်ပြသိမ်းဆည်းထားပါသည်။ အတွေ့များသော IP နမူနာတစ်ခုမှာ 192.168.1.65 (IPv4 အတွက်) ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း IPv6 သည် တစ်မူထူးခြားပြီး အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ။
၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 0-255 အကြား ကိန်းဂဏန်းများ ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ သင့်ကွန်ပျူတာ၏ IP ကို သိရှိလိုပါက အင်တာနက်တွင် ရှာဖွေခြင်းဖြင့် အချိန်မရွေး သိနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင့် IP လိပ်စာနှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည့် သင့်နိုင်ငံနှင့် မြို့ စသည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ဖော်ပြပေးနိုင်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုက် အများအပြား ရှိနေပါသည်။ အချို့သော ဝက်ဘ်ဆိုက်များဆိုလျှင် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ (ISP) ကိုပင် ဖော်ပြပေးနိုင်ကြပါသည်။
မူ သို့မဟုတ် ဗားရှင်းအမျိုးမျိုး (Different Versions)
အစောပိုင်းတွင် အင်တာနက်ပရိုတိုကော ဗားရှင်း4(IPv4) သာ ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ တိုးတက်မှုနှင့် လိုအပ်ချက် ပိုများလာမှုတို့ကြောင့် ယခုဆိုလျှင် အင်တာနက်ပရိုတိုကော ဗားရှင်6း(IPv6) အထိ ရှိလာပါပြီ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဆိုရပါက IP အကြောင်း လူတွေ ပြောနေကြသည်မှာ IPv4 ကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသည်ပင် အသုံးအများဆုံးလည်း ဖြစ်နေပါသည်။ IPv4 သည် 32 bit နံပါတ်များကို အသုံးပြုပြီး IPv6 တွင် 128 bit နံပါတ်များကို အသုံးပြုပါသည်။
ပုံစံအမျိုးမျိုး (Different Types)
အထက်ပါစာပိုဒ်သည် ဗားရှင်းအမျိုးမျိုး အကြောင်း ဖြစ်ပြီး ယခုစာပိုဒ်မှာ IP လိပ်စာများ၏ ပုံစံအမျိုးမျိုးအကြောင်းကို ရှင်းပြသွားပါမည်။ ထိုအမျိုးအစားများမှာ တည်ငြိမ် (Static) နှင့် ရွေ့လျား (Dynamic) အမျိုးအစားတို့ ဖြစ်သည်။ တည်ငြိမ် IP အမျိုးအစားကို သင့်ကွန်ပျူတာရှိ ကွန်ရက်ဆက်တင်ကို တည်းဖြတ်ခြင်းအားဖြင့် ထားရှိပုံဖော်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် တည်ငြိမ် IP များကို သုံးစွဲလေ့မရှိဘဲ ၎င်းတို့ကို မှန်ကန်စွာ ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါက သင့်အတွက် ပြဿနာ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ် IP အမျိုးအစားမှာ ရွေ့လျား အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် အသုံးများသည့် အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ရွေ့လျား IP အမျိုးအစားကို ရွေ့လျား လက်ခံဆောင်ရွက်သူ ထားရှိပုံဖော်မှု ပရိုတိုကော (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) ဖြင့် နေရာချထားပြီး ရုတာများ (Routers) သို့မဟုတ် သတ်မှတ် DHCP ဆာဗာများကဲ့သို့ ကွန်ရက်ဟာ့ဒ်ဝဲများပေါ်တွင် ပုံမှန်အားဖြင့် လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ဤသည်မှာ IP လိပ်စာများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိသင့်သိထိုက်သည့် အခြေခံ အချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ IP လိပ်စာကဘာလဲ ဆိုသည်ကို အသေးစိတ်သိရှိရန် [http://websitestatschecker.com] နှင့် သင့်ကိုယ်ပိုင် IP လိပ်စာကို ရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက် WebsiteStatsChecker.com [http://websitestatschecker.com] သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
မူရင်းဆောင်းပါး။ ။ http://EzineArticles.com/8187656
]]> http://www.burmesehearts.com/introduction-to-ip-addresses-2/feed/0စွဲလမ်းမိတဲ့နေ့များ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%85%e1%80%bc%e1%80%b2%e1%80%9c%e1%80%99%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%b1%e1%80%94%e1%82%94%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%85%e1%80%bc%e1%80%b2%e1%80%9c%e1%80%99%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%b1%e1%80%94%e1%82%94%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8/#respond Mon, 27 Feb 2017 11:35:08 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73963
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%85%e1%80%bc%e1%80%b2%e1%80%9c%e1%80%99%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%b1%e1%80%94%e1%82%94%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8/feed/0ညှို့အား http://www.burmesehearts.com/%e1%80%8a%e1%82%87%e1%80%ad%e1%80%b3%e1%82%95%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%8a%e1%82%87%e1%80%ad%e1%80%b3%e1%82%95%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8/#respond Fri, 24 Feb 2017 02:25:17 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73967
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%8a%e1%82%87%e1%80%ad%e1%80%b3%e1%82%95%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8/feed/0အလုပ်ခေါ်ယူခြင်း http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%9c%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%81%e1%81%9a%e1%80%9a%e1%80%b0%e1%80%bb%e1%80%81%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%9c%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%81%e1%81%9a%e1%80%9a%e1%80%b0%e1%80%bb%e1%80%81%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8/#respond Sat, 11 Feb 2017 12:30:07 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73625
BH Edtech Co., Ltd (ရန်ကုန်)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါရာထူးနေရာများ အလိုရှိသည်။ စိတ်ပါဝင်စားသူများ ဖေဖော်ဝါရီ(၂၈) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ support@burmesehearts.com နှင့် jobs@mmjobapp.com သို့ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ Sales and Marketing (အရောင်းမြှင့်တင်ရေး) မ(၃)ဦး အသက်(၂၀)မှ (၃၀)အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ Myanmar / English Typing နှင့် Microsoft Office ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ ညှိနှိုင်းလစာအပြင် Bonus ခံစားခွင့်လည်းရှိသည်။ ကြိုးစားသူအတွက် လစာ နှင့် ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ကို ကာလတိုအတွင်း ခံစားနိုင်သည်။ အလုပ်ချိန် – မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၆)နာရီဖြင့် တပတ်(၆)ရက် ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပကျောင်းများဖြင့် ပတ်သက်၍ လုပ်သက်အတွေ့အကြုံရှိသူအား ဦးစားပေးမည်။A APPLY HERE Freelance Doctor (အချိန်ပိုင်းဆရာဝန်) ကျား(၁)ဦး ၊ မ(၁)ဦး […]]]>
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%9c%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%81%e1%81%9a%e1%80%9a%e1%80%b0%e1%80%bb%e1%80%81%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8/feed/0Introduction to IP Addresses http://www.burmesehearts.com/introduction-to-ip-addresses/ http://www.burmesehearts.com/introduction-to-ip-addresses/#respond Wed, 01 Feb 2017 14:32:47 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=70916
Some people have already an idea about IP addresses while others have no clue what is it all about and why many people keep referring to it. This article would provide you some information about the IPs and their overall purpose without getting too techy. Keep reading till the very end to find out more […]]]>
Some people have already an idea about IP addresses while others have no clue what is it all about and why many people keep referring to it. This article would provide you some information about the IPs and their overall purpose without getting too techy. Keep reading till the very end to find out more about it.
IP stands for Internet Protocol. Every machine has its own unique identity onanetwork and that is what it is for (mainly). It assignsaunique identifying numerical label to every machine that is on any computer network that utilizes Internet Protocol for communications. You can think of it asaunique identity every citizen ofacountry has to differentiate among them, except in this case IP is used to differentiate among different devices that are on any computer network.
Apart from givingaunique numerical identity to every device, IP address also serves two other purposes. Firstly, it identifies the host or the network interface and secondly, it addresses the location. So, overall it has three major purposes. However, the role of IP is to know what we are looking for through the name, whereas the address tells us about the whereabouts and the route gives us an idea how to get there.
IP address is nothing butaset of binary numbers that although, are stored in text files are still displayed inamanner that easily readable for humans. A common example of an IP would be 192.168.1.65 (for IPv4) but IPv6 looks quite different and this is how it looks: 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334.
Normally they are the numbers which are between 0-255. You can always find your computer’s IP by searching on the internet as there are many websites that would provide you details related to your IP address such as your country, city and even the ISP depending upon the website you use.
In the beginning there was only Internet Protocol Version4(IPv4). However, the advancement and increasing requirement for communications lead to Internet Protocol Version6(IPv6). In general, when people are talking about IP they are referring to IPv4 as it’s still the most commonly used one. IPv6 uses 128 bit numbers whereas the IPv4 uses 32 bit numbers.
The above entry was about different versions, this entry would discuss the different types of IP addresses. These type are static and dynamic. A static IP can be configured in your computer by editing the network settings. However, static IPs are not really common and if they are not configured properly they can create some problems for you. The other type of IP is Dynamic. This is commonly used all around the world. Dynamic IP is allocated by Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) and normally runs on network hardware like routers or dedicated DHCP servers.
So, this is pretty much the basic information you need regarding IP addresses.
For more details on What is My IP Address [http://websitestatschecker.com] and to find your own IP address visit WebsiteStatsChecker.com [http://websitestatschecker.com].
Article Source: http://EzineArticles.com/8187656
]]> http://www.burmesehearts.com/introduction-to-ip-addresses/feed/0ဘာတွေသင်ယူချင်ပါသလဲ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%98%e1%80%ac%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%9a%e1%80%b0%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%9e%e1%80%9c%e1%80%b2/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%98%e1%80%ac%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%9a%e1%80%b0%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%9e%e1%80%9c%e1%80%b2/#respond Tue, 20 Dec 2016 13:08:07 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73285
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%98%e1%80%ac%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%9a%e1%80%b0%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%9e%e1%80%9c%e1%80%b2/feed/0ပညာဒါနမိတ်ကပ်သင်တန်းတွေကို ဘယ်သူသင်မလဲ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%ac%e1%80%92%e1%80%ab%e1%80%94%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%90/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%ac%e1%80%92%e1%80%ab%e1%80%94%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%90/#respond Sat, 05 Nov 2016 09:42:10 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=71260
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%ac%e1%80%92%e1%80%ab%e1%80%94%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%90/feed/0ပညာဒါန စက်ချုပ်ဘာသာရပ်(Workshop)သင်တန်းတွေကို သင်မည့်သူ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%ac%e1%80%92%e1%80%ab%e1%80%94-%e1%80%85%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%b3%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%98%e1%80%ac%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%95%e1%80%b9workshop/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%ac%e1%80%92%e1%80%ab%e1%80%94-%e1%80%85%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%b3%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%98%e1%80%ac%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%95%e1%80%b9workshop/#respond Sat, 05 Nov 2016 08:58:53 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=71241
ဒီဇင်ဘာ(၁၁)ရက်နေ့ ၊ တော်ဝင်ဂါးဒင်းဟိုတယ်တွင် ပို့ချမည့် ပညာဒါနသင်တန်းများဖြစ်သော စက်ချုပ်သင်တန်းဘာသာရပ်တွေကို ဘယ်သူ သင်ကြားမှာလဲလို့ သိချင်မှာပဲနော်။ Burmese Hearts က ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ ပညာဒါနစက်ချုပ်သင်တန်းတွေကို သင်ပေးမယ့်သူက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အမြဲတမ်း ပညာဒါန စက်ချုပ်သင်တန်းတွေ သင်ပေးနေတဲ့ ဒီဇိုင်နာဆရာမလေး သော်သဇင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဘာတွေကို ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ သင်ပေးပြီး ကျွမ်းကျင်လှတယ်ဆိုတာကို Facebook မှာ Thaw Thazin လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် အွန်လိုင်းကနေ သင်ပြနေတဲ့ သူ့သင်ခန်းစာတွေကို လေ့လာခွင့်ရမှာပါ။ ဒီဇင်ဘာ၁၁ရက်နေ့မှာတော့ Burmese Hearts ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုနဲ့ ဆရာမလေးသော်သဇင် သင်ကြားတဲ့ ပတ်ထမီ ၊ ဂျိတ်စကပ် ၊ Blouse အင်္ကျီ ၊ Fitting Smart အကျပ်အင်္ကျီ နဲ့ ဂါဝန်ချုပ်နည်းတွေကို တော်ဝင်ဂါးဒင်းဟိုတယ်ခန်းမမှာ လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါပြီ။ […]]]>
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%ac%e1%80%92%e1%80%ab%e1%80%94-%e1%80%85%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%b3%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%98%e1%80%ac%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%95%e1%80%b9workshop/feed/0Burmese Hearts ရဲ့ Conference တွင် ဟောပြောမည့်သူများ http://www.burmesehearts.com/burmese-hearts-%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%82%95-conference-%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%b9-%e1%80%b1%e1%80%9f%e1%80%ac%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%ac%e1%80%99%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%9e/ http://www.burmesehearts.com/burmese-hearts-%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%82%95-conference-%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%b9-%e1%80%b1%e1%80%9f%e1%80%ac%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%ac%e1%80%99%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%9e/#respond Sat, 05 Nov 2016 06:21:50 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=71224
]]> http://www.burmesehearts.com/burmese-hearts-%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%82%95-conference-%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%b9-%e1%80%b1%e1%80%9f%e1%80%ac%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%ac%e1%80%99%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%9e/feed/0BurmeseHearts EDTECH CONFERENCE 2016 – ဒီဇင်ဘာ(၁၁)ရက်နေ့ ၊ ၂၀၁၆- ဝင်ကြေးအခမဲ့ http://www.burmesehearts.com/burmesehearts-edtech-conference-2016-%e1%80%92%e1%80%ae%e1%80%87%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%98%e1%80%ac%e1%81%81%e1%81%81%e1%80%9b%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%94%e1%82%94-%e1%81%8a/ http://www.burmesehearts.com/burmesehearts-edtech-conference-2016-%e1%80%92%e1%80%ae%e1%80%87%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%98%e1%80%ac%e1%81%81%e1%81%81%e1%80%9b%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%94%e1%82%94-%e1%81%8a/#respond Wed, 02 Nov 2016 15:03:49 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=71187
]]> http://www.burmesehearts.com/burmesehearts-edtech-conference-2016-%e1%80%92%e1%80%ae%e1%80%87%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%98%e1%80%ac%e1%81%81%e1%81%81%e1%80%9b%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%94%e1%82%94-%e1%81%8a/feed/0Time to open call for talk submissions http://www.burmesehearts.com/time-to-open-call-for-talk-submissions/ http://www.burmesehearts.com/time-to-open-call-for-talk-submissions/#respond Sun, 02 Oct 2016 07:43:14 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=71048
]]> http://www.burmesehearts.com/time-to-open-call-for-talk-submissions/feed/0BurmeseHearts EDTECH Conference 2016 Announced http://www.burmesehearts.com/burmesehearts-edtech-conference-2016-announced/ http://www.burmesehearts.com/burmesehearts-edtech-conference-2016-announced/#respond Sun, 02 Oct 2016 06:45:22 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=71035
]]> http://www.burmesehearts.com/burmesehearts-edtech-conference-2016-announced/feed/0How the Internet Is Structured http://www.burmesehearts.com/how-the-internet-is-structured/ http://www.burmesehearts.com/how-the-internet-is-structured/#respond Mon, 19 Sep 2016 13:32:41 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=70907
The term Internet isacontraction of ‘interconnected networks’ and, indeed, the Internet isagigantic global collection of linked networks. The networks that make up the Internet can range in size from tiny (just two or three connected computers) to massive (thousands of interlinked machines). An Internet service provider (ISP) isatelecommunications business […]]]>
]]> http://www.burmesehearts.com/how-the-internet-is-structured/feed/0Study Game Design, Animation in Singapore with MAGES http://www.burmesehearts.com/study-in-singapore-with-mages/ http://www.burmesehearts.com/study-in-singapore-with-mages/#respond Tue, 06 Sep 2016 14:02:35 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=70248
]]> http://www.burmesehearts.com/study-in-singapore-with-mages/feed/ 0